भद्र सहमतिको श्रृंखला
प्रकासित मिति : २०७४ जेष्ठ ११, बिहीबार प्रकासित समय : ०७:२५
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले काँग्रेससँग भएको आफ्नो भद्र सहमतिलाई पालना गर्दै बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन ।
अहिलेसम्म सत्तासाझेदारीमा दलहरुबीच भएका भद्र सहमतिको श्रृंखलालाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ ।
संविधान जारी गर्ने बेला प्रमखु तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका मुख्य तीन नेताका वीच एक खालको सहमति वनेको थियो । संविधान जारी गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री, कांग्रेसका तात्कालिन सभापति शुसिल कोइराला राष्टपति र माओवादीलाई सभामुख वनाउने गरि भद्र सहमति थियो । तर , शुसिल कोइरालाले सहमतिय सरकार निर्माणमा असहयोग गदै आफै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार वन्न आए । त्यसवेला भएको भद्र सहमति पनि तोडिएको नेताहरुले सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिदै आएका छन् ।
४. ओली–प्रचण्ड भद्र सहमति
२५ असोज २०७२ मा एमाले–माओवादी गठवन्धनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री वने । गठवन्धन निर्माण गर्नेवेला दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरु वसेर नयाँ वजेट ल्याउने बेलासम्म ओली प्रधानमन्त्री वन्ने र त्यसपछि प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरि तीन वुँदे भद्र सहमति भएको थियो । उक्त समझदारी पत्र पछि सार्वजनिक नै भयो । तर ओलीले भद्र सहमति अनुसार माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व हसतान्तरण गर्न तयार भएनन । प्रचण्डले नै उनी विरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याए र ओली सरकार ढल्यो ।
५. देउवा–प्रचण्ड भद्र सहमति
ओली सरकारको वर्र्हिगमनसँगै काग्रेस–माओवादी नयाँ गठवन्धन निर्माण भयो । त्यसवेला देउवा–प्रचण्डबीच थप अर्को भद्र सहमति पनि भयो । स्थानिय तहको चुनावसम्म प्रचण्ड र प्रदेश र केन्द्रको चुनाव देउवा प्रधानमन्त्री भएर गर्ने दुई दलबीच भद्र सहमति भएको थियो । तर भद्र सहमति पालना हुँदैन भन्ने आरोप लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले नेपाली राजनीतिमा नैतिकता र इमान्दारिताको खडेरी तोडनका लागि आफुले राजनामा दिएको घोषणा गरे । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।